Afaka misotro labiera ve aho amin'ny sauna? - mahasoa sy manimba
Fantatry ny rehetra fa ny fomba fandroana dia misy fiatraikany tsara amin'ny olona iray. Ary maro ny olona mampiasa azy, satria ao amin'ny fandroana ihany no ahafahanao miala sasatra sy manasa. Ny fandroana sy ny sauna dia tena ilaina amin'ny olombelona, ​​misy fiatraikany tsara amin'ny vatana sy ny fanadiovana ara-tsaina.
Ny etona mandro dia manampy amin'ny fanesorana poizina manimba, ary koa hanafainganana ny metabolisma. Mampitombo ny fivezivezen'ny rà ny fomba fiasa, manamaivana ny aretin'andoha, manatsara ny rafi-pitabatabana. Ao amin'ny fandroana dia miakatra ny toe-po ary manjavona ny tsy fandriam-pahalemana.
Betsaka ny olona mametraka ny fanontaniana - azo atao ve ny misotro labiera fandroana... Amin'ny isa kely, araka ny fikarohana natao, dia hita fa tena ilaina izany. Ny labiera sy ny sauna dia zavatra roa tsy azo sarahina, ny fanekena an'io fisotroana io dia dingana mahafinaritra sy mahasalama. Ny labiera dia zava-pisotro manala metaly mavesatra sy sira alimina amin'ny vatana. Ireo toetra ireo dia mitombo imbetsaka rehefa mandray fomba fandroana. Fa tsara kokoa ny maka labiera kely malefaka.
Ny labiera sy ny sauna dia toy ny manofa manipulator ho an'ny mpanjifa, zavatra tsara ihany. Isaky ny fitsidihana tsirairay ao amin'ny efitrano fofona, dia mandritra ny fizotry ny vaping, ilaina ny maka 0 litatra an'io fisotroana hatramin'ny lanjan'ny vatana 33 kilao. Raha milanja mihoatra ny 100 kilao ny olona iray, dia asaina mihinana labiera antsasaky ny litatra aorian'ny "mpivady" tsirairay. Tokony hoheverinao ihany koa ny ezaka ataon'ny metabolisma sy ny fizotrany.
Ny fandroana dia tsy misy mba hisotro labiera any; ny labiera dia tsy maintsy soloina amin'ny habetsahan'ny antonony sy ho tombontsoan'ny fahasalamana. Ny olona tsirairay dia tokony hisafidy ho an'ny tenany karazana karazana labiera sahaza azy, ary koa ny fitondrana fisotroany manokana. Fa inona no mety ho tsara kokoa noho ny orinasa tsara mandany fotoana amin'ny fandroana na sauna, ary ankoatry ny fisotroana zava-pisotro malefaka vera?! Angamba tsy misy, miankina amin'ny faniriana, fotoana ary fahaizana ara-bola daholo izany.
Prostatitis sy fandroana: azo atao ve ny mifoka amin'ny prostatitis
Ahoana ary ary inona no tokony atao amin'ny fisotroan-dronono?
Vodka miaraka amin'ny labiera - Ny vokatry ny fisotroana alikaola
Ofuro (fandroana japoney): endri-javatra miavaka, hevitra
Iza no namorona ny labiera? Tantaran'ny zava-pisotro
Posted in Fahasalamana mahasalama
Prev Fisorohana sy fiarovana amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana
Manaraka Daty jamba: ahoana ny fomba fitondran-tena?
82 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,728.